भारतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु, ४६ हजार भन्दा बढी
१ र ११ कक्षामा कुन पाठ्यक्रम ?
श्रावण २८, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४६ हजार भन्दा बढी भएको छ । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका कारण ४६ हजार ९१ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा कोरोना भाइरसबाट ८ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको हो ।
त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या २३ लाख नाघेको छ । अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसबाट २३ लाख २९ हजार ६ सय ३८ जना संक्रमित भइसकेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा ६० हजार ९ सय ६३ नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् । भारतमा अहिलेसमम्कै सबैभन्दा धेरै संक्रमित महाराष्ट्रमा देखिएका छन् । महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका ५ लाख ३५ हजारभन्दा धेरै संक्रमित फेला परिसकेका छन् ।
अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका १६ लाख ३९ हजार ५ सय ९९ संक्रमित निको वा डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
२०७७ मंसिर ११ बिहिवार
कोरोना संक्रमित योजना आयोगका पूर्वउ ...
१ र ११ कक्षामा कुन पाठ्यक्रम ? ...
किसानको मागअनुसार गहुँको बीउ छैन ...
कोरोना महामारी : विश्वभर संक्रमितको ...
भारतका विदेशसचिव आज आउँदै ...